TB Joshua never prophesied about Tsvangirai :: NewsBite
Published: 2012 April 27 10:07:56 (16687 Views)
MDC-T spokesperson Douglas Mwonzora said the Nigerian televangelist Temitope Balogun (TB) Joshua was coming at the behest of Zimbabwe Pastors Forum (Zimpaf), the co-ordinators of the peace prayer meetings, contrary to speculative reports claiming the Premier was personally involved in the matter, NewsDay reported.
Mwonzora on Monday said: "Prophet TB Joshua was invited by Zimbabwean clergymen and our position as the MDC-T is that he is a man of God and should be allowed to visit any country.
"Our understanding is that the pastors and clergymen want him to come as their fellow clergyperson and we welcome his coming just as we would welcome any religious person who wants to pray for peace in our country. There is nothing to fear, especially if people are coming to pray."
Mwonzora also refuted claims TB Joshua had prophesied Tsvangirai would never win against President Robert Mugabe. "There was never such a prophecy - it is an invention of Zanu-PF and the CIO (Central Intelligence Organisation) who want to rubbish the Nigerian prophet TB Joshua.
"However, the people of Zimbabwe have seen from Emmanuel TV that TB Joshua's prophecies are done publicly and he prophesied about a number of issues that have come to pass," Mwonzora said.
"A lot of people are watching Emmanuel TV and if TB Joshua has anything to say about Zimbabwean leaders, I hope it will be made public."
Mwonzora's utterances follow reports some politicians were pushing to block TB Joshua's trip to Zimbabwe because of his alleged "political prophesies," which later turned out to be true.